Global Voices Any amin’ny Zaikabe Iraisam-pirenen’ny We Media · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Any amin'ny Zaikabe Iraisam-pirenen'ny We Media
Voadika ny 07 Avrily 2018 19:59 GMT
Eny, ho avy tokoa izahay. Ary antenainay fa maro dia maro ireo bilaogera sy ireo mpitoetra ao anaty tambajotra hafa no afaka hanatevin-daharana anay amin'ny alàlan'ilay pejy firesahana mivantana mahafinaritra izay misy sarintany sy saina sady vaovao no kinga, ary fitaovana fandikan-teny ho an'ireo maneho hevitra amin'ny fiteny maro samihafa ankoatra ny teny Anglisy.
Lanonana inona ary ity amoahako fanasàna virtoaly ity? Ity no Zaikabe Iraisam-pirenen'ny We Media faharoa karakarain'ny Media Center an'ny Ivontoeran'ny Fanaovangazety Amerikana, any Lôndôna izy io no hatao ny Alarobia 3 sy ny Alakamisy 4 Janoary (2006) ary
… mampivondrona ireo mpisava làlana avy amin'ny fiarahamonina mifandray izy ity – ireo mpandinika, mpamorona, mpamatsy vola, mpanatanteraka ary mpikatroka mafana fo miezaka mitady ny mety ho zava-bitan'ny tambajotra dizitaly izay mampifandray ny olona eny rehetra eny…
Miara-mivondrona izy ireo mba hifampianatra sy hifanakalo hevitra, hikaroka, hifanome aingam-panahy ary hanorina avy amin’ny fahalalàna nifampizaràna sy ny fahaizana niraisan’ny fiarahamonina mifandray. Mamorona hevitra, fahalalàna, tolotra ary raharaham-barotra vaovao ny ezaka iombonana ataon'izy ireo.
Efa nanomboka ny sasany amin'ireo resaka. I Salam Adil izay avy ato amintsika ihany dia nanoratra tsikera maharesy lahatra tao anatin'ny bilaoginy momba ilay sary nampiasain'ny We Media ho an'ilay fihaonambe (izay hitanao etsy amin'ny “sidebar” anay, amin'ny fotoana hanoratana), sarinà vehivavy misaron-boaly mampiseho ny rantsan-tànany misy ranomainty izay midika fa avy nifidy tao Iràka izy. Nalefa tao amin'ny bilaogin'ny Media Center, Morph, kosa indray izay lahatsorany izay avy eo.
Iray amin'ireo fepetra takiana amin'ireo izay nahazo fanasàna hanatrika, tafiditra ao anatin'izany ireo mpandray anjara tsy tapaka ao amin'ny Global Voices, ny fanoratana bilaogy momba ilay zaikabe, noho izany dia tokony hahita fanehoana bebe kokoa ianao ato anatin'ny andro vitsivitsy ho avy. Ankoatra izay, mandrindra ny takelaka amin'ny andro faharoa anatin'ny fandaharàna i Rebecca sy ny tenako.
“Fitokisana” no lohahevitry ny zaikabe. Nanao fanadihadiana an-tserasera ireo mpanohana lehibe ilay hetsika, dia ny BBC (ny bilaogy fandrakofany) sy ny Reuters (ny fandrakofany an-tserasera), handrefesana “ny toetran'ny olona manoloana ny fampahalalam-baovao sy ny fitokisana”. Tsy hambara amin'ny fomba ofisialy ny valin'ny fanadihadiana raha tsy amin'ny andro voalohan'ilay Zaikabe, fa kosa misy fizaràm-bokatra mahaliana azo jerena ety anaty aterineto amin’izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tsy siantifika ny fomba fanangonan-kevitra toy izany, indrindra rehefa hitanao fa fanontaniana valo monja no apetraka ary valiny dimy ihany no azo amaliana azy.
Tsy siantifika ihany koa ny fandalinako ilay fanadihadiana, kanefa hitako mahaliana kosa ny fahitàna fa saika mikasika ny fanoratana bilaogy daholo ny ampahatelon'ny fanontaniana. Ary ireto ny valiny (hatreto), araka ny tenin’ilay mpamaly, amin'ny fanontaniana hoe “Betsaka ireo tombontsoa azo avy amin’ny fanoratana bilaogy. Inona no ampiasanao izany?”. Mety misy fanontanina “miafina” ao ambadik'izany raha mandinika azy isika, avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra mankany amin'ny mpanjifa ny vaovao: “Betsaka ireo tombontsoa azo avy amin’ny fanoratana bilaogy. Inona no azontsika ampiasàna azy?”.
Tongava ary ampio izahay hitady ny valin'ireto sy ireo fanontaniana maro hafa, na hamerina handrafitra ny adihevitra amin'ny fametrahana fanontaniana vaovao!